Bixiyeyaasha qaarkood waxay muujinayaan in Aqoonsiga Face-ka uu ku dhowaan karo Mac-ga Wararka IPhone
ka nidaamyada amniga Apple ayaa isbedelaysa isla waqtiga ay iPhone bilaabeyso. Qaab noocan oo kale ah in cibaado kasta ay la xiriirto iPhone. Markii hore waxaan haysanay kaliya qaababka la yaqaan: PIN ama lambarka sirta ah. Si kastaba ha noqotee, dhowr sano ka hor ayay u muuqatay Taabo Aqoonsi, ku furo farahaaga. Sannadkii hore, markii la bilaabay iPhone X, ayaa yimid Aqoonsiga wajiga si aan ugu furno iphone-keena wajigeena.
Waa wax macquul ah in Aqoonsiga wajiga ayaa imanaya iPad Pro sannadkan, laakiin Ma gaari doontaa Macs? Runtu waxay tahay in pint uusan lahayn, ama ugu yaraan muddada gaaban. Si kastaba ha noqotee, shatiyadaha qaarkood ayaa la daabacay oo muujinaya sida Mac uu u isticmaali karo nidaam la mid ah inuu isku furo.
Miyaynu arki doonaa Aqoonsiga Aqoonsiga ee 'Mac ID' oo furaya Mac sannadaha soo socda?
Markii ay Apple soo bandhigtay OS X Mountain Lion waxay soo bandhigtay sidii ugub Naqshadaynta Awooda, nidaam uu Mac awooda u leeyahay inuu ku kaco falal kala duwan xitaa markii uu nasanayay. Qaabkan, emayllada iyo cusbooneysiinta waa la soo dejisan karaa xitaa haddii aan qalabka xirno. Maxay ku samaynaysaa Power Nap waxaas oo dhan? Aad u fudud. Patent-ka oo ay daabaceen Patently Apple muuji sida Mac uu ugu isticmaali karo astaantan kamaradda. Taasi waa, haddii kamaraddu aragto weji, waxay u jihayn lahayd qayb ka mid ah awooddeeda si loo ogaado loona hubiyo inay tahay weji la yaqaan. Hadday tahay, Waan furi lahaa Mac oo waxay ku dhaqaajin laheyd awooda buuxda si ay u bilaabaan isticmaalkeeda.
In kasta oo iyagu sinaba ugu yeedhin shaqada, kama badna mana ka yaraadaan Aqoonsiga wajiga ficil ahaan on Mac ah.
Haddii Mac-gaagu ogaado wajiga, markaa wuxuu adeegsanayaa aqoonsiga wajiga si uu u soo toosiyo Mac haddii adeegsadaha la aqoonsado […] Asal ahaan, Mac wuxuu ku sii jiri karaa hab hurdo inta uu wax sameynayo. fudud, si fudud loo ogaado haddii wejigu muuqdo iyo in kale - ka dibna waxay geli doontaa qaab awood sare si ay u maamusho qaybta aqoonsiga wajiga ka hor intaan si buuxda looga kicin qalabka.
Waxaa laga yaabaa in yaanan arkin mudada dhow sida ku dhacday Aqoonsiga Taabashada ah ee 'Macs', laakiin haddii ay tahay a sharad aamin ah wixii cusbooneysiin ah ee mustaqbalka Mac, Maaddaama Aqoonsiga Face-ku yahay nidaam fure wanaagsan, aad uga ammaan badan wax kasta oo kale oo hadda jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Aqoonsiga Face-ka miyuu imanayaa Macs? Shatiyadan ayaa muujinaya inay aad u macquul tahay
Qoriga Laba-geesoodka ah, Hadda waxaa laga heli karaa Cusbooneysiintii Ugu Dambeysay ee Fortnite